Automatic Hasp PU သားရေ RFID အမျိုးသားပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | ၀ ယ်ပါ WoopShop®
Automatic Hasp PU သားရေ RFID အမျိုးသားပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ
$19.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $24.99
အရောင် 6989- ချန်လှပ်နာမကိုအမှီ 6989-အနက်ရောင် 9810- ချန်လှပ်နာမကိုအမှီ 9810- ကော်ဖီ 9810- အနီရောင် 9810- အညိုရောင် 9810- မီးခိုးရောင် 9810-အပြာ 9810-အနက်ရောင် 6989- မီးခိုးရောင် 6989- ကော်ဖီ 6989-အပြာ 6989- အညိုရောင် 6989- အနီရောင်
6989- ချန်လှပ်နာမကိုအမှီ 6989-အနက်ရောင် 9810- ချန်လှပ်နာမကိုအမှီ 9810- ကော်ဖီ 9810- အနီရောင် 9810- အညိုရောင် 9810- မီးခိုးရောင် 9810-အပြာ 9810-အနက်ရောင် 6989- မီးခိုးရောင် 6989- ကော်ဖီ 6989-အပြာ 6989- အညိုရောင် 6989- အနီရောင်
Automatic Hasp PU Leather RFID အမျိုးသားပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ - ၆၉၈၉ ထားခွင့်ရှိသည် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
item အမျိုးအစား: ကဒ်ပြားနှင့် ID ပိုင်ရှင်များ
item အလေးချိန်: 106g
အမည်: Mini RFID ပါးလွှာသောပိုက်ဆံအိတ်များ
မှတ်ချက်။ အကယ်၍ မင်းကိုထွင်းထုရန်လိုအပ်လျှင်သင်၏အမည်ကိုအမိန့်ဖြင့်ချန်ထားပါ။ ထွင်းထုရန်ထုလုပ်ရန် ၃ ရက်မှ ၃ ရက်ခန့်ကြာမည်။ သင်သည်ထွင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားမေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ (ပုံစံထွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အထူးနေရာ) ။ ထွင်းထုပစ္စည်းပြန်လာသို့မဟုတ်လဲလှယ်၏အာမခံချက်မရှိပါ။ စာသားကသိပ်မရှည်သင့်ဘူး၊ ， မဟုတ်ရင်ကြီးလိမ့်မယ်
ကျောက်တံတား။ ótima qualidade ။
စတိုးဆိုင်ကောင်း! ထုတ်ကုန်ကောင်း! အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း, အမည်ပုံနှိပ်။ ကြိုက်တယ်
ငါ 10 သွားပါပြီသွားပြီ။ Ik raad deze verkoper aan ။